Bye...Bye: Barcelona Oo Shaqada Ka Caydhinaysa Ronald Koeman Iyo Magaca Tababaraha Cusub Oo Lasii Ogaaday - GOOL24.NET
Madaxweynaha Cusub ee Barcelona ayaa diyaar u ah inuu sameeyo isbeddel sal iyo baar ah, waxaanu kasoo bilaabayaa tababaraha oo la sheegay inuu go’aamiyey inuu shaqada ka caydhiyo Ronald Koeman.
Barcelona oo si xun uga soo hadhay tartanka Champions League oo wareegga 16ka ay ku garaacday PSG ayaa waxa kale oo ay kaalinta labaad kaga jirtaa horyaalka LaLiga oo ay shan dhibcood ka dambayso Atletico Madrid oo hoggaanka horyaalka haysa.
Tababare Ronald Koemann oo xagaagii loo magacaabay kooxda ayaa wali haysta fursad uu ugu guuleysan karayo horyaalka LaLiga iyo Copa del Rey oo kooxdiiisu ay taagan tahay finalka oo ay iskugu soo baxeen Athletic Bilbao.
Sidaas oo ay tahay Madaxweynaha cusub ee toddobaadkii hore la doortay ee Joan Laporta ayaa la sheegay inuu shaqada ka caydhin doono Ronald Koeman, isla markaana uu sii calaamadsaday tababarihii beddeli lahaa.
Sida ay ku warrantay idaacadda Cadena Ser, Laporta ayaa unkaya mashruuc cusub oo hoggaamineed si ay kooxdu dib ugu dhisanto, isla markaana ugu soo laabato heerkii uu gaadhsiiyey waqtigii hore ee uu madaxweynaha ahaa.
Cadena Ser waxay sheegtay in tababaraha kooxda RB Leipzig ee Julian Nagelsmann uu noqon doono tababaraha cusub ee Barcelona, kaas oo uu Laporta ka hawlgeli doono sidii uu ugu qancin lahaa inuu yimaaddo Camp Nou ka hor inta aanu shaqada ka caydhin Koeman.
Warku wuxuu intaa ku daray in Joan Laporta uu dareensan yahay in Ronald Koeman uu xidhiidh dhow la leeyahay madaxweynihii hore ee Josep Maria Bartomeu, sidaas darteedna tallaabada ugu horreysa ee xagaaga uu qaadayo ay noqonayso inuu caydhiyo macallinkan.
Wariyaha reer Spain ee Manu Carreno ayaa isaguna shaaciyey xidhiidh dhex-maray Barcelona iyo Julian Nagelsmann, waxaanu yidhi: “Laporta wuu ixtiraamaa Koeman laakiin ma hoggaamin doono mashruuca cusub, mana ahaan doono tababaraha kooxda xilli ciyaareedka dambe, laakiin Laporta wuxuu jeclaan lahaa tababare cusub, waxaana liiskiisa ugu sarreeya Julian Nagelsmann.”
Si kastaba, heshiiskii uu Ronald Koeman u saxeexay Barcelona xagaagii hore ayaa ahaa muddo laba sannadood ah oo ku eg dhamaadka xilli ciyaareedka dambe.